Factory valizy & fehikibo fehikibo - mpanamboatra sy mpamatsy fehikibo China
Ny fehin-kibo dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fametrahana ny valizy amin'ny toerany. Tsy maninona ny fampiasana fiara manokana, fiarandalamby na fiaramanidina, ho voafintina mora ny valizy, lasa be ny valizy ao anaty valizy. Tena manahirana izany. Miaraka amin'ny fanampian'ny valizy, dia manampy ny hery ivelany amin'ny valizy hanamboarana ny valizy. Ahoana no hanavahana ny valizinao amin'ny toerana imasom-bahoaka, ny hafa mety hampiasa valizy sy marika mitovy aminy, azonao atao ny manavaka ny valizinao amin'ny alàlan'ny valin'ny valizy. Asa iray io. Ho fanampin'izany, dia afaka manampy ny sary famantarana amin'ny valin'ny valizy. Avy eo ny fehin-kibo dia azo ampiasaina ho fanomezana fanomezana ho an'ireo mpandeha. Tian'ireo kaompaniam-pitaterana an-tserasera ny fanomezana toy izany. Ny fehikibo dia vokarina amin'ny 2 santimetatra ny sakany, manana fiarovana fiarovana mba hitazomana tsara ny valizy. Ny fitaovana isan-karazany dia azo nofidiana toy ny polyester, nylon & nylon tahaka ny fitaovana. Anisan'ireo fitaovana ireo, ny fitaovana nylon dia manana kalitao tsara indrindra sy mateza kokoa. Nylon manahaka azy no manaraka ary avy eo ny fitaovana polyester. Izy io dia afaka misafidy ny fampiasana azy sy ny vidiny. Ny fizotrany samihafa dia azo ampiasaina amin'ny sary famantarana toy ny fanontana silkscreen, fanontana CMYK, fanoratana vita amin'ny embossed, knit sns.
Fehin-kibo sy fehin-kibo